Sina borosy makiazy tsara tarehy mahavariana 13cm borosy makiazy vita amin'ny volon'osy vita amin'ny alika vita amin'ny hazo Mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Borosy makiazy matihanina mahafinaritra 13pcs tena tsara tarehy borosy makiazy vita amin'ny volon'osy vita amin'ny hazo
Anaran'ny vokatra Borosy makiazy matihanina mahafinaritra 13pcs tena tsara tarehy borosy makiazy vita amin'ny volon'osy vita amin'ny hazo
ara-nofo Volo sentetika + tantana hazo + ferrule aluminium
Loko Mainty, mavokely, volontany na namboarina
Famantarana Dongshen na namboarina
Fonosana 1 apetraka anaty boaty boribory na kitapo PU, ary avy eo 200sets ao anaty baoritra
Fotoana santionany 5-7andro, namboarina mila 15-20days
Fotoana famokarana Miankina amin'ny habetsanao, ambany noho ny 2000sets dia mila 15-20 andro, mihoatra ny 2000sets dia manodidina ny 20-35days
Fepetra fandoavana 30% petra-bola, ny fifandanjana alohan'ny fandefasana
Fomba fandoavana T / T, firaisana tandrefana, L / C
Ny tombotsoantsika Vidin'ny orinasa mifaninana + serivisy ho an'ny profesora + kalitao tsara
- 100% vaovao sy avo lenta.
- Borosy vita amin'ny makiazy tanteraka: Borosy fototra, borosy Concealer, borosy eyeshadow, borosy volomaso, borosy mena, borosy molotra, borosy mascara.
- Manangana volo biby tsara kalitao sy volo sentetika izay manome fahaizana lehibe mitazona vovoka, malefaka ary mahafinaritra ny hoditrao.
- Volo osy avo lenta: Kopa malefaka, rivotra madio, mamoaka milamina, mifanaraka voajanahary, mamorona makiazy mihitsy. Izy io dia be mpampiasa amin'ny borosy mena, borosy vovoka malalaka, borosy fanarenana ary borosy makiazy hafa.
- Kitapo hoditra malefaka tsara tarehy, mora angonina ary mitondra borosy.
- Tena ilaina ho an'ny matihanina ihany fa ho an'ny mpampiasa DIY ihany koa.
- Borosy makiazy kalitao matihanina izay ahitana ny fototra rehetra ilainao amin'ny fampiharana isan'andro.
- Volo sentetika voajanahary: volo malefaka sy marefo, volom-borona matevina. Sariaka amin'ny hoditra sy malefaka, na makiazy mihitsy aza. Tsy misy marika borosy, tsy misy vovoka. Ireo akora dia nafarana avy amin'ny marika BASF any Alemana.
F: orinasa mpanamboatra na varotra ve ianao?
A: fanamboarana matihanina any Shina izahay, manana traikefa famokarana 35 taona.
F: Azoko atao ve ny maka santionany?
A: Eny, tianay ny hanome anao santionany maimaimpoana raha manana fitehirizana izahay. Ho an'ny santionany nohavaozina dia maharitra 7-10 andro vao vita.
F: Rahoviana aho no mahazo ny vidiny?
A: Matetika izahay afaka 24 ora dia handefa anao ny lisitra nalaina.
F: Maimaim-poana ve ny fanontana sary?
A: Tongasoa eto ny sary famantarana maimaimpoana raha tonga any amin'ny MOQ ny habetsahana anananao.
- sokajy borosy makiazy: borosy fototra, borosy Concealer, borosy eyeshadow, borosy volomaso, borosy mena, borosy molotra, borosy mascara.
- Manangana volo biby tsara kalitao ary volo sentetika izay manome fahaizana mahatalanjona mitazona vovoka, malefaka ary mahafinaritra ny hoditrao.
- Volon'osy avo lenta: Smatetika mikasika, tsio-drivotra vaovao, releases mitovy, mifanaraka voajanahary, creates na dia makiazy aza. Izy io dia be mpampiasa amin'ny borosy mena, borosy vovoka malalaka, borosy fanarenana ary borosy makiazy hafa.
- A borosy makiazy kalitao matihanina izay ahitana ny fototra rehetra ilainao amin'ny fampiharana isan'andro.
- Volo sentetika voajanahary: Svolo matetika sy marefo, volom-borona matevina. Smpihavana sy malefaka, na dia makiazy aza. No marika borosy, tsy misy vovoka. Ny akora dia nafarana avy amin'ny marika BASF any Alemana.
Teo aloha: Borosy makiazy matihanina avo lenta 12mm kofehy vita amin'ny volo varahina ferrule mainty vita amin'ny makiazy napetraka
Manaraka: Eco-friendly kalitao vita amin'ny hazo vita amin'ny kofehy vita amin'ny volon'ondry vita amin'ny makiazy 5cm napetraka
Kitapo borosy tsara indrindra
Brush makiazy vaovao
Fanosotra borosy vita amin'ny orinasa
Logo momba ny borosy vita amin'ny borosy
Borosy fanaovana menaka mineraly
Makeup borosy marika manokana
Borosy fanamboarana ambongadiny marika marika manokana
Kavina mainty 16cm matihanina mainty mahazatra ...
Dongshen Kabuki borosy manokana marika lafo vidy ...
Borosy marika makiazy manokana napetraka volafotsy ambongadiny ...
Vovoka volo mahery volo sentetika 12pc ...
Dongshen namboarina manokana marika voajanahary voajanahary ...
Fitaovana borosy makiazy, borosy makiazy napetraka, Barber Shave, Faritra fiharatra, Mametraha makiazy borosy, Manaova borosy,